Ahoana no mba handao ny tobin ' i satana tanteraka
Ity hafatra ity dia natao ho ny olona rehetra izay mbola any an-tobin ' i satana.
Namana malala isany, ianareo izay mbola ao anatin' ny tobin' i satana, raha toa ianao ka ny satanist na ny mpamosavy fotsiny, na mpandraharahan ' ny anaty rano izao tontolo izao na ny mpandraharaha hafa fanjakan ' i satana, na inona na inona ny toerana ao amin'ny tobin ' i satana, ity hafatra ity dia natao ho anao.
I satana sy ireo rehetra izay manompo azy dia amin' ny farany any amin' ny helo. Raha toa ianao ka mpanao ody, izay midika hoe ny mpanompon ' i satana, izay manana ny ambaratonga ambany, amin'ny olona izay tsy mahita ny satana, ary izy irery ihany no miasa amin'ny demonia, na raha toa ianao ka iray satanist, izany hoe, ilay mpanompo lehibe ny satana izay mandray anjara amin' ny fivoriana miaraka amin' i satana, izany dia ny helo mandrakizay izay miandry ianao raha toa ka mitoetra ao amin' ny tobin' i satana ianao.
Fantatrao fa ianao dia afaka handao ny tobin 'i satana, raha sitrapony, sy hanatevin-daharana ny tobin' i Jesoa Kristy, mba ho voavonjy amin'ny rehetra ny herin ' i satana ary mba ho voavonjy mandrakizay ho an'ny rehetra. Rehetra tsy maintsy atao dia ny mba hiaiky amim-pahatsorana ny fanao ny famosaviana ary ny asan ' ny maizina, miaraka amin'ny mafy orina ny fanoloran-tena mba hiala indray mandeha ho an'ny rehetra. Ny fampianarana eto ambany ireto dia manazava hoe inona no atao raha te hiaiky ny asan' ny maizina ary handao ny tobin' i satana ho amin' ny tsara.
Fomba mibaboka ny Famosaviana
Anao, izay mbola any famosaviana, dia mahafantatra fa tsy afaka manantena ny ho voavela heloka amin' ny alalan' ny Andriamanitra sy ny hafahana raha tsy manao ny fibebahana feno sy marin-toetra. Raha toa ka manao ny semblance ny fibebahana ianao, na raha toa ka mibaboka sasany ny asanareo ianareo amin' ny alalan' ny concealing ny hafa, na raha toa ka mibaboka ny fihetsika amin' ny fomba blurred ianao, izany hoe, amin'ny alalan'ny hafetsena, izany dia tsy hanompo ianao na inona na inona.
Raha toa ianao mody mba hiaiky ny asa famosaviana, fa misafidy afenina sasany ny antsipiriany, dia tsy hahazo famelan-keloka, satria Andriamanitra dia mahafantatra ianao dia mandainga, sy ny fanafahana anao azy ireo dia tsy ho azo atao, na oviana na oviana.
Ny fanekempihavanana natao tamin' i satana dia mihitsy torotoro, na oviana na oviana, mandra-izy ireo dia tanteraka sy amin-kitsim-po nibaboka. Fantatr' i satana izany tsara; Izany no antony mahatonga ny ezaka rehetra mba hitandrina ny mpamosavy ao amin' ny lainga isaky ny te hiaiky ny asany izy ireo izy. Fantatr' i satana fa raha toa ka manao ny fibebahana marina iray ianao, dia ho voavela heloka ianareo. Satana dia mahafantatra ihany koa fa lainga iray kely ihany no ampy hanafoanana tanteraka ny fibabohanao. Noho izany dia niakatra ho any aminao mba hahafantatra ny zavatra tianao.
Tsarovy tsara izay rehetra fanao rehetra sy ny asan ' ny famosaviana tsy maintsy niaiky. Izany no zavatra takiana mba hahazoana fanafahana. Ny mifanohitra amin'izany dia tsy azo atao. Izany dia noho izany antony izany indrindra fa maro ireo izay mino ny efa niaiky ny famosaviana, dia foana ny mahita ny tenany niraikitra tao ny filalaovana ody. Mihevitra izy ireo fa efa nahazo ny fanafahana azy ireo, nefa na dia teo aza izany, dia mbola any an-tobin ' i satana. Mahafantatra koa fa mijoro handresena ianao rehefa marin-toetra ianao sy ianao fa ny hany loser raha toa ka misafidy ny mandainga ianao. Ny famonjena dia ao amin' ny tsatòka. Raha mbola tsy miala ao amin'ny tobin ' i satana, ny Helo no miandry anao.
Eto dia ny fomba mibaboka famosaviana raha misy ny manantena ny ho voavela heloka sy ny nafahana:
1- Manazava ny fotoana sy ny fomba ianao dia nampidirina ho ao an-famosaviana.
Misy mpilalao ody tsy afaka hilaza ny fotoana sy ny fomba izy ireo dia nampidirina mba famosaviana. Marina indrindra izany ho an'ireo teraka miaraka amin'ny famosaviana. Ka raha manao ka mampihatra ny famosaviana, saingy tsy afaka manazava ny fotoana sy ny fomba ianao dia nampidirina ho ao an-famosaviana, izany dia midika hoe ianao iray amin'ireo teraka miaraka amin'ny famosaviana. Raha izany, fotsiny mariho fa ianao dia nateraka niaraka tamin ' ny filalaovana ody.
2- Miteny hoe hafiriana ianao no efa am-perinasa ao amin'ny famosaviana
3- Mibaboka ny asan'ny filalaovana ody, ny famosaviana tsirairay.
4- Manome ny anaran 'ireo rehetra izay efa niharam-boina ny famosaviana fa tonga avy aminao, na ao amin' izao tontolo izao, na ao amin'ny Fiangonana.
5- Lazao izay nataonao mba tsirairay tamin'izy ireo, tamin'ny antsipiriany.
6- Manome ny anaran ' ny olon-drehetra dia ianao miara-miasa amin'ny, tsy namela iray.
7- Manome ny anaran ' ny vahoaka rehetra ianao nahomby tamin' ny hampiditra an filalaovana ody, ny ankizy sy ny olon-dehib.
8- Omeo ny anaran' ireo rehetra ianao nanandrana ny hampiditra ao amin' ny filalaovana ody, fa tsy misy fahombiazana, ankizy sy olon-dehibe, ary hazavao hoe nahoana ianao no tsy nahomby.
9- Omeo ny anaran' ireo olona rehetra nataonareo incantations amin' ny. Manazava ny karazana incantations nataonao momba ny olona tsirairay izay voalaza.
10- Raha toa ianao ka mpandraharaha i satana eo amin' ny asa fitoriana, ao amin' ny Fiangonana, omeo ny anarana zavatra rehetra ny hafa mitsiatsiaka fantatrao ao amin' ity fiangonana ity, na dia tsy miara-miasa ao anatin'ny ekipa iray aza ianao.
11- Raha toa ianao ka mpandraharaha i satana eo amin' ny asa fitoriana, ao amin' ny Fiangonana amin'ny ankapobeny, tsy maintsy hanambara ny misiôna nankinina ianao sy ny mpiara-mitory aminy ianao, ary ianao dia tokony hanome ny anaran' ny mpiara-mitory
12- Lisitry rehetra amin'ny asan'ny apostoly ny amin ' ny faharatsiana ianao efa natao.
Nahoana no ilaina ny manao fiaiken-keloka amin ' izany fomba izany?
Satria misy indrisy anefa fa tsy misy fomba hafa. Andriamanitra dia tsy hamela anao noho ny filalaovana ody, raha mbola ny olona dia natao ho babo izany famosaviana. Amin' ny alalan' ny fanomezana anarana ny olona hanohitra izay nataonao incantations rehetra, ary amin' ny alalan' ny fanomezana ny antsipirian' ny zavatra nataonao tamin' ireo olona ireo, ianao dia manokatra ny lalana ho amin' ny fanafahana azy ireo, ary ianao koa dia manokatra ny lalana mankany fanafahana anao. Andriamanitra dia tsy hanafaka anareo rehefa fantany ianao an-tsitrapo mitazona olona hafa ho babo. Izany dia tsy azo atao.
Rehefa avy manao ny tena fiaiken-keloka, ianao manana ny fahafahana miala tsiny amin'ny rehetra niharam-boina izay mbola velona. Raha misafidy fanahy iniana ny hanafina ny sasany amin'ireo asa nataonao ianao, dia azo antoka fa ny fanafahana azy dia tsy azo atao, ary izay anao dia tsy hahazo famelan-keloka, na oviana na oviana. Ary raha ianao no manadino ny zavatra vitsivitsy, raha tokony ho marina ao am-ponao, Ny Tompo dia mampahatsiahy anao ny zavatra efa hadino. Ny lainga rehetra lazainao mandritra ny fitanisan-keloka dia hanafoana tanteraka ny fitanisan-keloka.
Ireo rehetra izay nieritreritra fa izy efa niaiky ny filalaovana ody, fa izay mbola ao amin ' ny fomba fanao, dia tsy maintsy mahatakatra fa ny fiaiken-keloka dia tsy tsara atao. Ilaina ny maintsy manao ny vaovao fiaiken-keloka.
Raha voaporofo amin' ny fomba mazava ny filalaovana ody, nefa ny tsy mieritreritra ianao fa mpilalao ody ary ny tsy mahalala izay tokony hibaboka, amin'ity tranga ity dia demony ianao. Ny olona iray izay mitondra ny voa avy amin' i satana, saingy tsy afaka manaiky sy hiaiky izy ireo mba ho voavela heloka sy nanafaka, izy demonia, izany hoe ny olona iray izay tsy ho azo vonjena. Noho izany tsy dia azo atao ho an'ny olona mba ho voavonjy raha tsy misy ny fibebahana sy ny fanafahana azy ireo. Izany tsy no azo atao.
Noho izany ianao raha toa ka mpandraharaha i satana, sy mino ianao dia avy amin' ireo izay afaka ny ho voavonjy, fantatrareo fa tsy maintsy ho vita izany voatery amin'ny alalan'ny fiaiken-keloka rehetra ny asa sy ny fandaozana rehetra ny voankazo ' i satana. Alohan' ny fisafidianana ny toughen anareo amin' ny lainga, ary mody tsy hahafantatra ny zavatra tokony hiaiky, tsarovy fa izany dia ny helo izay miandry anareo. Atsaharo ny mamitaka ny tenanao!
Ny Tompo rehefa mangataka anao mba hiaiky ny famosaviana, dia aza miditra ao fialamboly mba hibaboka ny fangalarana, ny lainga, ny famitahana, ny fijangajangana ary ny fahotana hafa. Miaiky Ihany ny famosaviana. Raha manana fahotana hafa mba manaiky, ianao dia hanao izany misaraka, sy tsy amin' ny alalan' ny fampifangaroana azy ireo amin' ny famosaviana. Ary raha ny ianao manantena hahazo na inona na inona ny famelan-keloka amin'ny maha-vokatry ny fiaiken-keloka, tsy miezaka hanamarina ny tenanao. Manaiky fotsiny ny asanareo sy ny fomba fanao, ary miaiky azy ireo.
Satana dia mandany ny fotoana mampatahotra ary mandrahona ireo izay miasa ho azy. Satana milaza azy ireo fa raha toa ka miaiky ny asanareo, izy ireo ho faty. Tiako mba hanomezana antoka ianao fa raha i Jesoa Kristy dia ny fialofana, ianao dia tsy ho faty. Mibaboka ny asanareo amin-kitsimpo sy ny Tompo Jesoa Kristy dia miaro anao amin'ny valifaty rehetra amin'ny satana. Ny raharaha amin' ny satanists izay nanaiky an' i Jesoa, dia manaporofo izany aminao.
Enga anie ny Tompo Jesoa Kristy hihaino anao ary miaro anao raha toa ka misafidy ny ho marin-toetra!
Aza misalasala manao tahadikan' ireo lahatsoratra ireo ary mizara izany.